အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝကမျြး — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
"နှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါသည်ခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးအမြင်များနှင့်ရမှတ်စိန်ခေါ်ကြောင်းဂီတလုပ်နေခဲ့ကြရတယ် – ဒါပေမဲ့အမြဲသီချင်းန့်အသတ်ရှိပါပွီ, သာဤမျှလောက်သင်တစ်ဦးသီချင်းအတွက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ရှိပါတယ်ကွောငျ့,,"ခရီးစဉ်ကပြောပါတယ်. "ဒီအယ်လ်ဘမ်နားထောငျသူကောင်းကျိုးအသက်တာ၏ရိုက်ချက်ကိုပေး၏, နှင့်စာအုပ်တဖန်အသက်ရှင်ရန်မည်သို့မည်ပုံအပေါ်တစ်ဦးကို manual ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်. ငါသည်ဤစာအုပ်စာဖတ်သူကိုမုသာစကားမှရှောင်သွားနှင့်ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသကျရှငျဖို့ကူညီလိမ့်မည်ဟုဆုတောငျးလကျြတာပါ။ "
မိမိအသက်ကို၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံစာအသုံးပြုခြင်းဖြင့်, ခရီးစဉ်ကပြောသည်ခဲ့ကြသောမုသာစကားကိုလေ့လာ, အသစ်တစ်ခုဖျော, ကောင်းကျိုးအသက်တာ၏သမ္မာကျမ်းရုပ်ပုံ. ပျြောရှငျမှုအပါအဝင်အသက်ရှည်သမျှစူးစမ်းခြင်း, အောင်မြင်ခြင်း, and morality in light of God’s truth ကောငျး အသက် redefines the term as not living to please yourself but living by faith inagood God.
"ဒီကောင်းသောအသက်သည်ကော်ပိုရိတ်လှေကားရဲ့ထိပ်မှတက်ပြီးသည်မဟုတ်, ကောင်းကျိုးဘဝကိုမဆိုတာဝန်ကနေအခမဲ့ဘဝမဖြစ်,"ခရီးစဉ်ကပြောပါတယ်. "ဒီကောင်းသောအသက်တာကိုဘုရားသခင်နှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းတှငျနထေိုငျသူခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်သမျှသောလက်ခံသည်။ "
ခရစ်ယာန်ဂီတမြင်ကွင်းမှမရှိပါမျက်နှာသစ်, ခရီးစဉ်ရဲ့ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်, သူတို့ကသာလျှင်သိလိုလျှင်, hit stores nationwideafew days after his high school graduation. That same year, သူလည်းချိုးငှက်ဆုကို-အမည်စာရင်းတင်သွင်းအပေါ် featured ခဲ့သည်, တံဆိပ်အိမ်ထောင်ဖက် Lecrae နှင့်အတူ timeless ဂန္ထဝင် "ယေရှု muzik". ခရီးစဉ်ရဲ့ sophomore အယ်လ်ဘမ်,20/20, အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2008 အများကြီးအောင်မြင်မှုစပါးကိုရိတ်: အ Billboard ထိပ်ဆုံးသို့ခြိုးဖောကျ 200, ရောက်ရှိ #11 မှာ Billboard ခရစ်ယာန်အယ်လ်ဘမ်ဇယားနဲ့ဆင်းသက်အပေါ် #4 ဧဝံဂေလိတရားကိုဇယားအပေါ်. သူ့ရဲ့တတိယစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်နဲ့အတူ, နှစ်ဦး World အကြား, Trip offeredacollection of reflections on life inafallen world. Those reflections resonated with listeners as B2W debuted at #1 ခရစ်ယာန်နှင့်ဧဝံဂေလိတရားကို Billboard ဇယားအပေါ်, #5 ထို Hip-Hop / Rap ဂီတ iTunes ကိုဇယားနှင့် #9 ထိပ်တန်းအယ်လ်ဘန်ကို iTunes ဇယားအပေါ်. အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ကိုလည်းနှစ်ဦးချိုးငှက်အဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံးဧဝံဂေလိတရားကို Rap ဂီတ / Hip-Hop အယ်လ်ဘမ်များအတွက်ကြယ် Award ဆုလက်ခံရရှိ.
ခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိ, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ မှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီး #2 အရရှိအောင်နေစဉ်ခြုံငုံနှင့်က Hip အပေါ်နှစ်ဦးစလုံးကို iTunes ဇယား Hop #3 Billboard ရဲ့ Hip-Hop ဇယားအပေါ်ရပ်တည်ချက်ကို, မှာလေယာဉ်ဆင်းသက် #17 ထိပ်ဆုံးမှာ 200 Billboard ဇယားနဲ့ယူပြီး #1 ခရစ်ယာန်နှင့်ဧဝံဂေလိတရားကို Billboard ဇယားအပေါ် slot ပါ.
ခရီးစဉ်နားဆင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလဖျော်ဖြေကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရီးထွက်ခဲ့သည်. In conjunction with အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ, Trip is currently onapromotional nationwide tour and will beafeatured အမျိုးမျိုးသောမှာအနုပညာရှင် 2012 ဝိညာဉ်တော်သည်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေအပါအဝင်ပွဲတော်များ, အတ္တလန်တာပွဲတော်တွင်နှင့်ကျောက်ထရံအိုင်, တခြားသူတွေကိုအကြား.
ထက်ပိုပြီးအဘို့ 115 အနှစ်, Moody ထုတ်ဝေသူများသစ္စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, substantive material that focuses on the most important issues in life. They continue to meet the needs ofagrowing and changing marketplace with products of the highest quality, အစဉ်အလာပုံနှိပ်စာအုပ်တွေကတဆင့်, အသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်မှတဆင့်, and now through e-books for select electronic readers. ပိုမိုသိရှိလိုပါက, please visit http://www.moodypublishers.com/.
ရောကျမှတ်တမ်းနှင့် ReachLife ဝန်ကြီးဌာနများအကြောင်း
ဖို့ကွိုးစား Records ကိုနှင့် ReachLife ဝန်ကြီးဌာနများရောက်ရှိ, "သမ္မာကျမ်းစာအမှန်တရားနှင့်မြို့ပြအခြေအနေတွင်အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူး။ " ၌တည်ထောင်ခဲ့သော 2003, Records ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သမ္မာကျမ်းစာသံကိုလမ်းအတွက်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းရောက်ရှိတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်ဂီတကိုအသုံးပြုပြီးမှဆက်ကပ်အပ်နှံခရစ်ယာန်တစ်ဦးဂီတစံချိန်တံဆိပ်သည်. ရော Records ကိုသမ္မာကျမ်းမှနျတရားကိုဖျောထုတျဖို့ဂီတလုပ်ကိုင်နေစဉ်, ReachLife Ministries aims to empower ministry leaders with this music in order to grow the urban church.
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လာမည့်ရောကျမှတ်တမ်းနှင့် ReachLife ဝန်ကြီးဌာနများဖြစ်ရပ်များ၏စာရင်း, please visit http://reachrecords.com. For more information about ReachLife please visit http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:51 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Michael Glaze • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို! You should come out to Moody Bible Institute – Spokane forarelease concert! :)